नेपाली सेनाका दुईतारे जर्नेल नै चलाउँछन् जुवाघर (भिडियोसहित) - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७४ असोज १० गते १६:३०
काठमाडौँ । नेपाली सेनाका दुईतारे जर्नेल होमकुमार लावतीकै संलग्नतामा ललितपुरको सातदोबाटोमा जुवाघर सञ्चालन भइरहेको खुलासा भएको छ ।
सातदोबोटो प्रहरी वृत्तको पाँचसय मिटर पेरिफेरिमा रहेको दीपावली मार्गस्थित एउटा घरमा नेपाली सेनाका कानुन विभाग प्रमुख जर्नेल लावतीले संगीता भनिने आसा लिम्बुसँग मिलेर घरानियाँ जुवाघर सञ्चालन गरेका हुन् ।
जुवाघरमा दैनिक ३६ जनासम्म घरानियाँ जुवाडे पुग्ने गरेका छन् । खानपिन, हतियारसहितको बन्दोबस्तीसँगै सुरक्षित घेराभित्र सञ्चालनमा रहेको जुवाघरमा जर्नेल लावती आफ्नो गाडी बा २ झ २९४३ मै पुग्छन् र जुवाघर चलाउँछन् ।
जर्नेल लावतीले सञ्चालन गरेको जुवाघरमा प्रहरीले छापा मार्न सकेको छैन । अर्कातिर दक्षिण एसियामै पुरानो संगठन मानिने नेपाली सेनाका ९७ हजार सुरक्षाकर्मी आवद्ध संगठनकै जर्नेलले जुवाघर सञ्चालन गरेको विषय सेनामासमेत छलफल भएको छैन ।
जुवाघरमा पैसा हारे तुरुन्तै ५२ प्रतिशत ब्याजमा तत्कालै ऋण लगानी गर्ने दलालहरु पनि हुन्छन् । कागज नै गरेर ब्याज दिइन्छ ।
लावतीले जुवाघर सञ्चालन गरेका विषयमा खोजी गरेपछि यो समाचार प्रसारणमा नल्याउन सञ्चारकर्मीलाई चेतावनी आएको थियो । समाचार प्रकाशन गरे ‘ठीक नहुने’ धम्की दिइएको थियो ।
लावतीको जुवाघरबारे जनता टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बाइलाइन’ले पर्दाफास गरेको भिडियो पूरा हेर्नुहोस्ः
निर्मला पन्तलाई बलात्कार गर्नेको नाम खुलासा ! प्रहरी र अधिकारकर्मीबीचमा घम्साघम्सी
मुख्यमन्त्री राईको विवाह यही मंसिरमा !
रघुवीर महासेठले राम्रो काम गर्नुभएको छैनः माधव नेपाल(अन्तर्वार्ता)
निर्णय नै नभएको कुरा किन बोले मोदीले ? भट्टराई र गुरुङबीभ भनाभन (अन्तर्वार्ता)